Android ဖုန်းတွင် အသုံးပြုသော လျှို့ ဝှက်ကုဒ်များနေဇော်လင်း (နည်းပညာများ)
Home » Android , Mobile , Technique » Android ဖုန်းတွင် အသုံးပြုသော လျှို့ ဝှက်ကုဒ်များ
Written By နေဇော် လင်း on Friday, July 4, 2014 | 12:00 PM
Android OS အသုံးပြုတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် လျှို့ ဝှက်ကုဒ်များ ဖြစ်ပါ တယ်။
1. Testsလုပ်ရန် ကုဒ်များ
*#*#0*#*#* – LCD test *#*#0673#*#* သို့မဟုတ်
2. Obtaining Firmware information
3. Backup လုပ်ရန် ကုဒ်များ *#*#273283*255*663282*#*#* - ဖိုင်လ်များကို Backup လုပ်ရန် Menu တစ်ခုပေါ်လာမည်။
4. Service mode *#*#197328640#*#* - you can change settings or run tests in service mode
5. End Call / Power button ပြောင်းလဲခြင်း *#*#7594#*#*
6. Reset လုပ်ခြင်း *2767*3855# – Factroy setting သို့ ပြန်လည် Rest လုပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကုဒ်ကို အသုံးပြုလျှင် file များ၊ setting များ ပြတ်ကုန်ပါမည်။ used to reset your phone to factory settings. Be careful with it though, this option will remove files, setting etc
*#*#7780#*#* - Factory Data reset လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ဖုန်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသော Google Account setting များ၊ Downloa လုပ်ထားသော Application များ၊ system နှင့် application data နှင့် Setting များကို ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။
Source by :Royal Hero Media
Posted by နေဇော် လင်း at 12:00 PM
Labels: Android, Mobile, Technique
X Video Editor- Beautify Video (Andriod ဖုန်းတွေမှာ Video တည်းဖြတ် ဆော့ဝဲလ်)
X Video Editor လေးက Andriod ဖုန်းတွေအတွက် ဗီဒီယို တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့ ဆောဝဲလ်ကောင်းပါ။ သူ့ရဲ့ Function တွေကတော့ ဗီဒီယိုတွေ ကိုယ်တိုင်ဖုန်း...
Nero Burning အကြောင်း အသေးစိပ် လေ့လာရန်
Nero Burning အကြောင်း ... ဒီအပိုင်းမှာ CD တွေ DVD တွေ အလွယ်နည်းနဲ့ ဘယ်လို ကူးရမလဲ ရေးထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားကြ လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး S...
ခဲပန်းချီ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို မိမိတို့ ဖုန်းထဲက အလွယ်တကူ ဖန်တီးကြမယ်
အခုတစ်လော အသုံးများနေတဲ့ ခဲပန်းချီ ပုံစံလေးတွေကို ဖန်တီးလို့ရတဲ့ Android Manboker APK ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး တရုတ်စာတွေ ရေးထားပါတယ်။ လူတိ...